Shiinaha Kitchenaid Dual Convection Countertop Oven Air Fryer, Countertop Toaster Oven Foodie Gril, Convection Oven with Glass Bowl, Hawada hawada leh 360 ° Anti-scal Holder Holder Protect, Si Fudud Loo Isticmaalo loona Nadiifiyo, 7L-10L CO-05DHA soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Shao Hong
Kitchenaid Dual Convection Countertop Oven Air Fryer, Countertop Toaster Oven Foodie Gril, Convection Oven with Glass Bowl, Hawo qaboojiye leh 360 ° Ka-hortagga Ka-hortagga Ka hortagga, Fudud Isticmaalka iyo Nadiifinta, 7L-10L CO-05DHA
Heerka Awoodda: 7L
Awoodda Ugu Badan: 10L
SAHAL IN LA ISTICMAALO:Qalajiyaha hawada oo ku qalabaysan hal guddi xakameyn hal-taabasho ah. Kaliya daar mashiinka, dooro cuntada ka dibna bilow. Dhadhamiya cuntada dhadhan fiican leh waxaad u baahan tahay oo keliya 3 tallaabo!
SAHAL IN LAGA SADEEYO: Weelka dhalada ah ee dusha sare ee foornada wax lagu kala qaado, ku shub baaquli dhalada biyo oo ku maydh xumbada, ma jecli mashiinka wax lagu kariyo ee caagga ah ee leh haraaga.
360 ° KA HORTAGA LOOGU TALAGALAY: Mashiinka hawadu wuxuu la yimaadaa ilaaliyaha kuleylka ilaaliya kuleylka cabbirka buuxa si uu u ilaaliyo qoyskaaga iyo carruurtaada
360 ° RAPD HAWADA KUleylka:Foornadan kululeeyaha ah ee kululaynta waxay aqbashaa tikniyoolajiyad cusub oo cunto karinta ah 360 ° wareegga hawo ee degdega ah taasoo yareyneysa 85% saliid iyo dufan kayar saliida dhaqameed qoto dheer. Cunto u kari si siman natiijooyinka dahabiga-bunniinka iyo macaan leh nidaamka wareegga hawada ee waxtarka badan.
Gawaarida istaandarka ah: Tongs, rack Low, Dual rack
Qalabka ikhtiyaariga ah: Pizza pan, Giraanta Extender, Dambiisha Steam, Skewers, Roast rock
◎ Karti 7L karti karis ah.
Liance U hogaansanaanta heerka amniga GS A-13.
Dhammaystir dhan-ka-mid ah, qayb cunto karis ah oo kala duwan si loo dubto, loo dubo, loo dubo, barbeque, uumiga, loo kariyo, fuuqbaaxo, barafka, iyo hawo shiil.
10 Barnaamijyada karinta ee hore loo kariyo ee loogu talagalay karinta noocyada kala duwan ee cuntada.
Lid Daboolka dhalada ah ee muraayada leh iyo weelka dhalada u adkaysata ee badbaadada cuntada.
Temperature Heerkulka karinta wuxuu u dhexeeyaa 65ºC ilaa 230ºC (149ºF - 446ºF).
Kordhi awoodda adoo ku daraya giraan fidiyaha (waa ikhtiyaari).
Automatically Si otomaatig ah ayuu u demiyaa marka daboolka kor loo qaado (Ikhtiyaariga ah GS A-13 oo la soo ururiyey).
Hore: Convection foornada infrared Halogen ahama steel Extender Ring Convection foornada, 12-17L Dial Kicinta Function galaas baaquli Air Hawo, shiilay Pan
Xiga: Toaster Oven Convection Super Wave Oven Halogen, Infrared & Convection Tech 1300watt 12L-17L, 10 Cunto Soo Diyaaris ah, OEM iyo ODM Factory
XL Convection Foornada Saliida-Yar ee Mashiinka, 12L-17L, ...
Shaohong Air Mashiinka, Countertop Toaster Oven foo ...
Qaboojiyaha hawada kululeeyaha kululeeyaha ugu fiican iyo Mult ...
Shaohong hawo hawo qaboojiyaha loogu talagalay foornada qulqulka, 10 ...